Bogga ugu weyn Faallooyinka Caymiska Nolosha Haven 2021: Faa'iidooyinka & Qasaarooyinka | Legit & Fadeexad | Sida ay u shaqayso
Isha sawirka: finanbuzz.com
Ma waxaad raadineysaa shirkad caymis nololeed oo leh qorshaha caymiska ugu fiican? Hadday sidaas tahay, waxaad joogtaa meesha saxda ah maxaa yeelay Caymiska Nolosha ee Haven ayaa kuu leh qorshaha caymiska nolosha ee ugu fiican.
Nolosha Haven waxay leedahay hab-ku-horrayn onlayn ah oo ka dhigaysa ikhtiyaar caymis nololeed oo aad u fiican halkaas oo macaamiishu ka codsan karaan oo ku maamuli karaan caymiskooda nololeed iyagoo adeegsanaya internetka.
Sidoo kale, waxay bixiyaan hab codsi toos ah oo toos ah oo toos ah oo dhaafa imtixaannada caafimaadka ee codsadayaasha qaarkood. Badeecadeeda baaxadeedu way kooban tahay, laakiin qanacsanaanta macaamilku waa mid sare.
Kuwa doonaya inay si dhaqso ah u iibsadaan caymiska nolosha, Haven Life ayaa laga yaabaa inay noqoto bixiyahaaga caymiska ugu fiican baahiyahaaga.
Waa maxay Caymiska Nolosha ee Haven?
Haven Life, oo fadhigeedu yahay Magaalada New York oo ay isla aasaaseen Yaron Ben-Zvi sanadkii 2014, ayaa ah mid ku cusub warshadaha caymiska.
Waxaa, si kastaba ha ahaatee, iska leh oo taageeray MassMutual, oo ah shirkad caymis oo weyn oo ku taal Springfield, Massachusetts, oo leh khibrad ka badan 160 sano.
Hadafka Haven Life waa in la bixiyo alaab caymis nololeed oo la awoodi karo, oo si sahlan loo maamuli karo oo onlayn ah, oo ka madaxbannaan khalkhalka iibsashada caymiska dhaqanka.
Wax badan oo ku saabsan Caymiska Nolosha Haven
Haven Life Plus, oo ah ikhtiyaar dhammaystiran oo lagu dari karo caymis, ayaa bixiya adeegyo dheeraad ah. Haven Life Plus lagama heli karo Florida, New York, North Dakota, South Dakota, ama Washington, sifooyinka qaarkoodna lagama yaabo inay ka helaan California.
Xubnaheeda ayaa galaangal u leh:
Trust & Will waxay bixiyaan adeeg dijitaal ah si loo abuuro dardaaranka internetka.
Aaptiv, oo ah barnaamij jirdhis ku saleysan maqal, oo xubin ka ah hal sano.
Shiftter Time, oo ah aalad kaa caawineysa sameynta qorsheynta safarka si aad u yareyso daahitaanka diyaaradda.
Adiga iyo shan xubnood oo qoyskaaga ah, LifeSite, oo ah sanduuq dhigaal oo ammaan ah.
Ka hel 15% dhimis adeeg kasta oo ah CVS MinuteClinic.
Haven Life sidoo kale waxay iibisaa sanadlaha.
Sidee buu Haven Life Insurance u shaqeeyaa?
Haven Life waxay ku iibisaa caymiska nolosha muddada MassMutual ee qorshayaasha Haven Term iyo CM Life (MassMutual affiliate) siyaasadaha Haven Simple.
Haddii qofka caymiska lihi uu dhinto muddada mudada, dheefta waxaa la siiyaa ka -faa'iideystayaasha siyaasad ahaan hal mar.
Intaas waxaa sii dheer, lacagtan mar-mar ah waxaa loo isticmaali karaa in lagu daboolo kharashaadka nolosha dhammaadka ah, kharashaadka nolosha billaha ah, amaahda guryaha ama waajibaadka kale, iyo sidoo kale daryeelka ilmaha ama kharashyada kale ee ku tiirsan.
Waxaa kaloo loo isticmaali karaa koontada kaydka ee xubnaha qoyska.
kan akhri, 10 Qorshayaal Wadaag Caafimaad 2021 | Beddelka Caymiska Cusub
Siyaasadaha caymiska nolosha Haven
Haven Life waxay heshaa xog waxayna si dhakhso leh u qiimeysaa codsadayaasha iyadoo la adeegsanayo algorithm iyo sirdoon macmal ah. Ganacsigu wuxuu bixiyaa laba nooc oo caymis nololeed muddada:
#1. Haven Term wuxuu bixiyaa ilaa $ 3 milyan oo caymis ah dadka da'doodu ka yar tahay 60 sano, iyo ilaa $ 1 milyan kuwa u dhexeeya 60 iyo 64 sano.
Qaar ka mid ah dadka caafimaadka qaba illaa 59 jir ayaa laga yaabaa inay xaq u yeeshaan ilaa $ 1 milyan oo caymis ah oo isla markiiba bilaabma.
Xaalado badan, si kastaba ha ahaatee, codsadayaashu waa inay ku aflaxaan tijaabada caafimaadka caymiska nolosha si ay u helaan caymis.
2. Haven Simple waxaa loogu talagalay dadka aan doonayn inay maraan baaritaan caafimaad ama aan u qalmin caymiska Haven Term.
Haddii codsigaaga dhijitaalka ah la oggolaado, waxaad heli kartaa ilaa $ 500,000 oo caymis ah. Haddii aad ku nooshahay California, Delaware, South Dakota, North Dakota, ama New York, Haven Simple lama heli karo.
Sidoo kale, haddii aad u bukooto dhimasho, waxaad isticmaali kartaa qayb ka mid ah dheeftaada geerida haddii aad leedahay siyaasad Haven Life oo leh dheef la dedejiyey.
Waxaad ka heli kartaa ka -dhaafitaan raacaha qaaska ah xaaladaha qaarkood, taas oo macnaheedu yahay inaadan bixin doonin lacagta caymiska haddii aad naafo joogto ah tahay.
Intee in le'eg ayay tahay inaad dalbato Caymiska Nolosha Haven?
Waa inaad toos ula xiriirtaa Haven Life si aad u hesho macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan inta ay tahay inaad dalbato caymiska nolosha. Si kastaba ha noqotee, marka ay timaado inta ay le'eg tahay, waa inaad dalbataa dheefaha caymiska, sharciga gobolku wuxuu inta badan xiraa shirkadaha caymiska nolosha.
Caymiska Nolosha Faa'iidooyinka iyo Qasaarooyinka
Badeecadaha caymiska oo ay qortay shirkad weyn oo caymis
Caymis ayaa la heli karaa iyada oo aan la marin baaritaan caafimaad
Rider waxaa ku jira dheefo dheeraad ah
Haven Life waxay sumcad ku leedahay adeegga macmiilka oo wanaagsan.
Caymiska nolosha oo kaliya ayaa la bixiyaa
Ikhtiyaarada daboolista lagama heli karo dhammaan gobolada
Ikhtiyaarada raacida xadidan
Faallooyinka Caymiska Nolosha ee Haven
Falanqayntayada ku saabsan Caymiska Nolosha Haven waxay ku saleysan yihiin habab tiro leh oo qiimeeya xasilloonida iyo kalsoonida caymis kasta, iyo sidoo kale adeegga macmiilka (kaalinta 10aad ka galay 23 meheradood oo loogu talagalay qanacsanaanta macaamilka ee JD Power ee 2020 Daraasadda Caymiska Nolosha ee Mareykanka).
Sida laga soo xigtay daraasadda NerdWallet ee xogta laga helay Ururka Qaranka ee Komishannada Caymiska, MassMutual, oo soo saarta siyaasadaha Haven Life, ayaa cabashooyin aad u yar ka heshay maamulayaasha gobolka intii la filayay shirkad baaxaddeeda leh saddexdii sano ee la soo dhaafay.
Sababtoo ah haven Life oo ah hab aan dhib lahayn, xitaa go'aannada siyaasadda caymiska ee aadka u adag ayaa aad u fudud.
Haven Life sidoo kale waxay leedahay waxoogaa khasaare ah, sida xaqiiqda ah inay kaliya bixiso caymiska nolosha muddada.
Intaas waxaa sii dheer, in kasta oo taageerada macmiilka ee shirkaddu ay kaa caawin karto wixii su'aalo ah, macaamiisha qaarkood ayaa doorbidi kara raaxada la macaamilka wakiilka caymiska shaqsi ahaan.
Dib -u -eegista Caymiska Nolosha ee Haven: Ma Sharcibaa mise waa Fadeexad?
Caymiska Nolosha Haven wuxuu helay dhibco guud oo ah 4.3 oo ku salaysan nuxurka iyo dib u eegista, waxaana kaalinta 2aad ka galay liiska Caymiska Nolosha Guud ee ugu Wanaagsan sannadka 2021. Haven Life xooggeedu wuxuu ka soo jeedaa is-dhexgalka internet-ka ee saaxiibtinimo leh.
Halkii lala macaamili lahaa wakiil, bixiyaha caymisku wuxuu bixiyaa siyaasad caymis nololeed oo muddo-la'aan ah oo guddi ah taas oo fudud in la codsado oo la maamulo.
Si kale haddii loo dhigo, caymiska nolosha ee hoyga waa sharci.
Sidoo kale, hubi tan: Caymiska Daryeelka Muddada Dheer 2021 | Faa'iidooyinka iyo Qasaarooyinka | Siduu U Shaqeeyo
Caymiska Nolosha ee Haven Life ma bixiyaa dhimashada isdilka?
Guud ahaan, qawaaniinta gobolka ee xukuma lacag -bixinta dhimashada is -dilka waxay ku xidhan yihiin shirkadaha caymiska nolosha. Dadka leh siyaasadaha leh siyaasado shaqeynayay in ka badan laba sano ayaa inta badan u qalma inay gudbiyaan sheegasho.
Si kastaba ha noqotee, sababta oo ah siyaasadda Haven Life way kala duwan tahay iyadoo ku xiran nooca siyaasadda iyo gobolka, waa inaad la xiriirtaa shirkadda ama wakiil caymis si aad u hesho macluumaad dheeraad ah.
Caawimaad ayaa la heli karaa haddii aad ka fekereyso inaad is disho. Khadka Ka-hortagga Is-dilka Qaranka waxaa laga heli karaa 800-273-8255 wakhti kasta oo maalintii ah si lacag la'aan ah, gargaar qarsoodi ah.
Ururka, oo bixiya taageero iyo ilaha deegaanka, wuxuu maamulaa in ka badan 150 xarumood oo dhibaatooyin ah. Haddii aad ku jirto dhibaato, fadlan la xiriir.
Gunaanad: Faallooyinka Caymiska Nolosha ee Haven
Caymiska Nolosha ee Haven waa ikhtiyaar weyn oo loogu talagalay dadka doonaya siyaasad nololeed muddo-gaaban laakiin aan uga baahnayn kaalmo qof-qof ah wakiil.
Waxaad ka heli kartaa qiimayaal waxaadna ka dalban kartaa caymiska muddada khadka tooska ah Haven Life, lagamana yaabo inaad u baahato inaad qaadato baaritaan caafimaad.
10 Qorshayaal Wadaag Caafimaad 2021 | Beddelka Caymiska Cusub
Dib -u -eegista Caymiska Nolosha ee Bestow 2021: Ma Sharcibaa mise waa Fadeexad | Sida ay u shaqayso
10 Meesha Ugu Fiican Ee Lagu Iibsado Muraayadaha Aan Caymis Lahayn 2021
Weligaa ma joogtay meel aad ku haysatay dhibaato baabuur, sida inaad dul marto qaar…
Caymiska Baabuurka Ku -meelgaarka ah ee UK: Sida ay u Shaqayso | Faa'iidooyinka & Qasaarooyinka
Waxaan markaas ahaa arday jaamacadeed, oo qoyskayga la jooga fasaxyada. Aabahay wuxuu hadda helay…